I-Semalt - Umhlahlandlela Omkhulu Kanjani Ukukhipha Imininingwane Ye-Amazon Ukusebenzisa i-Python
Ukukhipha amasethi amakhulu we-data kusuka kumawebhusayithi njenge-Amazon akulula. Amasayithi angakuvumela ukuba ufinyelele amakhasi angu-400 ewebhu ngayinye. Ama-Amazon namanye amawebhusayithi amakhulu e-commerce asebenzisa i-ASIN, igama elingukhiye elisetshenziselwa amawebhusayithi e-commerce ukulandelela phansi inani lemikhiqizo ku-database.
Kulokhu okuthunyelwe, uzofunda ukuthi ungakha kanjani umkhiqizo ozosetshenziswa ngokuhamba kwesikhathi ukuze ukhiphe izincazelo zemikhiqizo nemininingwane yamanani e-Amazon. Kwabaqalayo, i-Python iyilimi lokuhlela elihlose injongo eligcizelela ekufundeni kweskripthi. Nazi izindlela zokusebenzisa umkhiqizo wakho.
Imikhiqizo yokuqapha kuma-Amazon
I-web scraping isetshenziselwa kakhulu ukukhipha isethi enkulu yedatha kumawebhusayithi e-commerce. Nge-scraper yomkhiqizo, ungakwazi ukulandelela kalula ukutholakala kwesitoko, ukulinganisa kwamakhasimende, nokushintsha kwamanani.
Ukuhlaziya ukuthi imikhiqizo idayisa kanjani ku-Amazon
i-Web data extraction ihlanganisa ukukhipha idatha ewusizo kusuka kumasayithi. Ukuze usinde ukuncintisana okuqinile ezimakethe zezezimali, kufanele ulandele ukusebenza komncintiswano wakho. Eminyakeni embalwa eyedlule, ukususa amasayithi kusuka kumasayithi e-e-commerce kuye kwaba umsebenzi owonayo futhi okhuni. Siyabonga nge-Python, ukusula lezi zingo kwenziwa lula.
Umkhiqizo uhlakaza kalula idatha evela e-Amazon ngokugqamisa i-ASIN yabo. Idatha ekhishiwe isetshenziselwa abathengisi bezimali ukuhlaziya ukuthi izimpahla zithengisa kanjani ku-Amazon. Ama-Scrapers asetshenziselwa izinhloso ezehlukene. Nanka ezinye izinto ezisetshenziselwa izivuno zomkhiqizo.
Ukuhlaziya ukulinganisa komkhiqizo we-Amazon nokubuyekezwa
Ukuhlola izimpahla zokukhangisa API
Ukuhlaziya izinga lokulingana nokukhanya
I-Python inconywa kakhulu uma kuziwa ekukheni nasekupheni amafayela kusuka kumawebhusayithi ashukumisayo njenge-Amazon. Noma kunjalo, ngaphambi kokumba ngokujulile ngendlela yokuthola idatha kusuka kumawebhusayithi e-commerce, ake sicabangele imininingwane engasuswa kulezi zingosi. Nasi uhlu olukhomba amaphiko olugcizelela amasethingi wedatha angatholakala nge-scraper yomkhiqizo.
Intengo yokuthengisa yomkhiqizo
Izidingo zephakhethi ze-python
Kule posi, isihloko esiyinhloko sisebenzisa i-Python ukulanda nokuphinda i-HTML. Ukubuyisa idatha yakho usebenzisa i-Python kufana nokuchofoza kwesokudla kwesici. Kuyinto elula. Landa i-HTML kusuka kukhasi lakho lewebhu lomkhiqizo oyithandayo bese uthola yonke i-XPath yenkampani ehlosiwe njengencazelo yamanani nemkhiqizo.
Unayo igama lekhodi okumele uyisebenzise? Uma kunjalo, ake sihambe. Vele uthayiphe igama lekhodi yakho ku-prompt wakho. Emva kokuthola ikhodi, yishintshe nge-ASIN yakho siqu. Ifayili yokukhishwa kwe-JSON (idatha. json) equkethe zonke izinhlu ze-ASINs idatha izokwenziwa.
Izinqubomgomo nemigomo ilawula amawebhusayithi e-commerce. Uma uhlunga, gwema ukwephulwa kwezinhlelo zewebhusayithi zokugwema ukuhlukumeza. Izingosi ze-E-commerce zinciphisa abasebenzisi ekufinyeleleni amakhasi angaphezu kwangu-400 ngesigaba ngasinye. Ngomkhiqizo we-Python, ungaqapha kalula imikhiqizo yokulinganisa nokuzibophezela kwamasheya Source .